DJI प्रेत 4: प्राविधिक र तुलनात्मक विशेषताहरू | नि: शुल्क हार्डवेयर
DJI प्रेत 4: प्राविधिक र तुलनात्मक विशेषताहरू
DJI एक प्रसिद्ध र पुरस्कार विजेता चीनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनी हो। यो हवाई फोटोग्राफीको लागि डिजाईन र ड्रोन उत्पादन गर्न समर्पित छ। यसको गुणस्तर उत्कृष्ट छ र प्रत्येक ड्रोन मोडेलको विशेषताहरूले यसलाई बजारमा सब भन्दा माग गरिएको र सबैभन्दा सफल बनाएको छ। केवल ती बिक्री नेताहरू हुन्, तिनीहरू पनि टेलिभिजन काम, संगीत, फिल्म उद्योगको लागि फिल्म उद्योग, आदि को लागी सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ।
यसले हाल ड्रोन मार्केट सेयरको लगभग %०% प्रतिनिधित्व गर्दछ, र यो यदि तपाई पेशेवर बजार मात्र फिल्टर गर्नुहुन्छ भने केही बढी हुन्छ। वास्तवमा, DJI ले २०१ won लाई जित्यो टेक्नोलोजी र ईन्जिनियरिंग एमी पुरस्कार drones द्वारा आरोहित क्यामेरा को लागी यसको प्रविधि को लागी। र यदि त्यहाँ एक ड्रोन मोडेल छ कि बाहिर खडा छ, त्यो प्रेत श्रृंखला छ।
1 म यो केको लागि प्रयोग गर्न सक्दछु र म यसको लागि के प्रयोग गर्न सक्दिन?
1.1 के मैले पेशेवर ड्रोन किन्नु पर्छ?
2 अन्य DJI मोडेलहरूको साथ भिन्नता
3 प्रेत technical प्राविधिक विशेषताहरु
3.1 प्रेत 4
3.2 प्रेत4प्रो
3.3 प्रेत4प्रो +
3.4 प्रेत4उन्नत
3.5 प्रेत4उन्नत +
4 DJI प्रेत3​​मा सुधारहरू
4.1 भविष्य DJI प्रेत 5
म यो केको लागि प्रयोग गर्न सक्दछु र म यसको लागि के प्रयोग गर्न सक्दिन?
डीजेआई ड्रोनहरू विशेष गरी हुन् रेकर्डि and र / वा छवि क्याप्चर कार्यहरू प्रदर्शन गर्न डिजाइन गरिएको। तिनीहरू रेसि forको लागि एरोडायनामिक र लाइटवेट मोडेलहरू छैनन्। त्यसोभए यदि तपाइँ रेसि drone ड्रोनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, डीजेआई उत्तम विकल्प होइन। तर यसको स्थिरता र सुविधाहरूले एमेच्यर्स र पेशेवरहरूलाई भिडियो शूट गर्न र हवाई फोटोहरू लिनको लागि उत्तम बनाउँदछ। यसको लागि यो तपाईंलाई फेला पार्न सक्ने उत्तम उत्पादनहरू मध्ये एक हो।
कहिलेकाँही मलाई सोध्यो पनि छ यदि तपाईं वजन उठाउन सक्नुहुन्छउदाहरणका लागि, उद्धार किटहरू वा उद्धारका लागि पहुँच नहुने पोइन्टहरूमा आपूर्ति पुर्‍याउन इत्यादि। सत्य यो छ कि प्रेत क्वाडकोप्टरले केहि सय अतिरिक्त ग्राम खडा गर्न सक्छ, तर तिनीहरू समर्थन र फोटोग्राफी उपकरण ती बोक्ने भार बाहिर बोक्न डिजाइन गरिएको छैन। यदि तपाईं यसलाई बाहिर लैजानुहुन्छ भने तपाईं अरू केही लोड गर्न सक्नुहुनेछ ... के कुरा निश्चित छ त्यहाँ एक डीजेआई S900 (वा औद्योगिक श्रृंखला) prop प्रोपेलरहरूको साथ छ जुन kg किलोग्रामसम्म लोड गर्न सकिन्छ, एक पर्याप्त पर्याप्त रकम।
निष्कर्ष, यदि तपाईं राम्रो चित्रहरू चलाउन वा राम्रो छविहरू लिनको लागि चाहनुहुन्छ भने, DJI एक राम्रो विकल्प हो. रेसि and र अन्य उद्देश्यहरूको लागि, तपाईंले अन्य भेरियन्टहरू हेर्ने बारेमा सोच्नु पर्छ...
के मैले पेशेवर ड्रोन किन्नु पर्छ?
यदि तपाईं एक शुरुआत हुनुहुन्छ र तपाईंले कहिले पनि एउटा कोशिस गर्नुभएको छैन, उत्तर होईन। यसको सस्तोमा तपाईले सस्तो मोडेलको साथ सुरू गर्नुपर्दछ। चाहे तपाईं एक मौसमी शौकीनी हो वा पेशेवर, DJI तपाइँको लागि सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरू छ भन्ने कुरामा श don't्का नहुनुहोस्।
यदि उत्तर हो हो भने, तपाईंले आफैंलाई पनि सोध्नु पर्छ DJI संस्करण वा मोडेल तपाईंलाई आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं प्रेतको साथ छविहरू र भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक DJI प्रेत3​​प्रो को लागी व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं एक शौक हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईंलाई अरू केहि चाहिएमा, त्यसपछि DJI फ्यान्टम versions संस्करण मध्ये एकका लागि सिधा जानुहोस्।
अन्य DJI मोडेलहरूको साथ भिन्नता
DJI का लागि धेरै मोडेलहरू छन् यसका प्रयोगकर्ताहरूको बिभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्। सब भन्दा उल्लेखनीय मोडेलहरू हुन्:
DJI स्पार्क: एक सरल र सजिलो ड्रोन को लागी सबैको लागि। एमेचर्सका लागि राम्रो विकल्प। तिनीहरू सस्तो छन् र आकारमा धेरै ठूलो छैन, तर गुणस्तर र प्रविधि अझै सभ्य भन्दा बढी छ। तर अन्य उत्कृष्ट मोडेलहरूसँग लाभ वा प्रविधिहरूको आशा नगर्नुहोस् ...
DJI Mavic: ती स्पार्कको मूल्य मा डबल, त्यसैले तिनीहरू सस्तो ड्रोन छैनन्। यो श्रृंखला हवाई फोटोग्राफी र भिडियो को प्रशंसकहरु संग एकदम लोकप्रिय छ। यो एक परिष्कृत डिजाइन र बुद्धिमान उडान मोड छ, राम्रो स्वायत्तता संग, गति, स्थिरता र एकदम मौन। यस ड्रोनको धेरै संस्करणहरू छन्, जस्तै एयर, प्रो, प्लेटिनम, इत्यादि।
DJI प्रेत: यो फर्म क्वाडकोप्टरको राजा हो। उत्तम छविहरू लिन र उच्च परिभाषा भिडियो रेकर्ड गर्न यसको स्ट्यान्डमा उच्च गुणस्तरको क्यामेरा बोक्न राम्रो हुन्छ। यसको मूल्य उच्च छ, तर उत्तम परिणामहरू पाउन यो खर्च गर्न लायक छ। त्यसकारण यो छवि पेशेवरहरूको लागि मनपर्ने हो। हाल, तिनीहरू th औं संस्करणको लागि जाँदैछन्, र अघिल्लो जस्तो जस्तै, त्यहाँ भेरियन्टहरू छन् जस्तै सामान्य र प्रो र प्रो प्लस, थोरै महँगो, तर अतिरिक्तको साथ।
DJI प्रेरणा: mot मोटर्स र महान शक्ति र चपलता संग drones को अर्को श्रृंखला गति मा सबै भन्दा राम्रो रेकर्डि। बनाउन। उदाहरण को लागी, एक्शन फ़िल्म शट लिन, चालमा मान्छेलाई पछ्याउनुहोस्, कारहरू, इत्यादि।
DJI चश्मा: यसको मूल्य स्पार्क भन्दा अलि बढी छ, तर यो प्रेत र माभिक भन्दा सस्तो छ। यो मोडेल विशेष गरी FPV गग्गलका साथ प्रयोगको लागि राम्रो हो, पूर्ण इमर्सिभ उडान अनुभवको लागि डिजाइन गरिएको। तपाईंको टाउकोको चाल क्यामेराको अभिमुखिकरण परिवर्तन गर्दछ ताकि तपाईं उडान समयमा सबै देख्न सक्नुहुनेछ। खैर, यसको मतलब यो होइन कि अघिल्लोहरू एफपीभीसँग उपयुक्त छैन, केवल यो कि यो यस प्रविधिसँग राम्रोसँग एकीकृत छ।
DJI औद्योगिक: यो केहि अधिक विशिष्ट प्रयोगहरूको लागि विशेष श्रृंखला हो। तिनीहरूले अधिक तौल उठाउन सक्दछन् किनकि उनीहरूसँग सामान्य of को सट्टामा rot सम्म रोटर हुन्छ। तिनीहरू कृषि उद्योग मा धेरै प्रयोग गरीन्छ।
तपाईं यी कुनै पनि मोडेलहरू खरीद गर्न र तुलना गर्न सक्नुहुनेछ DJI आधिकारिक स्टोर स्पनिश मा। तपाइँ सबै श्रृंखलाको लागि सामानहरू (समर्थन, क्यामेरा, ...) को पनि ठूलो संख्यामा फेला पार्नुहुनेछ।
अब तपाइँलाई थाहा छ DJI मोडेलहरूका सुविधाहरूफ्यान्टम with, ब्रान्डको मुकुट रत्नहरू मध्ये एकको साथ जाऊँ ...
प्रेत technical प्राविधिक विशेषताहरु
El यस श्रृंखलामा सम्मिलित हुन अन्तिम प्रेत4होअघिल्लो मोडेलहरूमा उल्लेखनीय सुधारका साथ। यस ड्रोनको प्राविधिक विशेषताहरू प्रभावशाली छन्।
यो हो प्रेत4श्रृंखला को सबै भन्दा आधारभूत, राम्रो प्रदर्शन र प्राविधिक सुविधाहरूको साथ जुन मैले यहाँ वर्णन गरेको छु:
तौल: 1380 XNUMX g
एसेन्ट गति: m m / s (उडान मोडमा निर्भर गर्दै)
अधिकतम उडान गति: km२ किमी / घन्टासम्म (उडान मोडमा निर्भर गर्दै)
अधिकतम झुकाव कोण: º२º सम्म (उडान मोडमा निर्भर गर्दै)
अधिकतम कोणीय गति: 250º / s (उडान मोडमा निर्भर गर्दै) सम्म
अधिकतम उचाई: 5000 मीटर
अधिकतम हावा प्रतिरोध: १० मीटर / से
ब्याट्री जीवन: २ min मिनेट लगभग। 28 5350० एमएएच ली-पो ब्याट्री र चार्जर सहित
अपरेटिंग तापमान दायरा: ०-º०ºC
जियोलोकेशन प्रणाली: GPS + GLONASS
स्थिरीकरण: ax अक्षहरू
क्यामेरा: १२..12.4 MP CMOSf/ २.2.8 अपर्चर, HDR र UHD (4K) को साथ समर्थन
मेमोरी कार्ड: GB 64 जीबी UHS-१ कक्षा सम्म माइक्रोएसडी समर्थन गर्दछ
रिमोट कन्ट्रोल फ्रिक्वेन्सी: २.2.4 घीगाह (मोबाइल उपकरणका लागि समर्थन सहित रिमोट) विस्तारित लाइटब्रिज
बाधा पत्ता लगाउने प्रणाली: सेन्सरहरूको तीन सेटको साथ 5-वे (अगाडि, पछाडि, मुनि र पट्टि)
छवि रिले को लागी मोबाइल अनुप्रयोग: आईजे र एन्ड्रोइड को लागी DJI GO4(220ms लेटेन्सी संग)
मूल्य: लगभग 1100 ११००
प्रेत4प्रो
La DJI प्रेत4प्रो संस्करण यो बेस को सम्बन्धमा एक सुधारिएको संस्करण हो, केहि अतिरिक्तको साथ। माथिका सबै प्लसहरू समावेश गर्दछ:
दूरी वा अधिकतम उचाई: 6900 XNUMX०० मिटर
ब्याट्री जीवन: min० मिनेट लगभग।
तौल: 1400 XNUMX g
क्यामेरा सेन्सर: CMOS २०MP
यी सुधारहरू प्रतिनिधित्व गर्दछaलगभग € 500 को मूल्य वृद्धि, कि छ, यो एक छ १€०० को अनुमानित मूल्य.
प्रेत4प्रो +
La DJI प्रेत4प्रो प्लस संस्करण यो प्रो संस्करण मा एक सुधार हो, र अघिल्लो भन्दा एक सानो मूल्य वृद्धि। सुधारहरू, बेस फ्यान्टम as को साथ साथै हुने सबै चीजहरू सहित, हुन्:
नियन्त्रण घुंडी: 5.5..XNUMX इन्च स्क्रीन समावेश सहित, एक मोबाइल उपकरण को उपयोग को आवश्यकता को हटाउँछ
रेडियो नियन्त्रण आवृत्ति: तपाई हस्तक्षेप घटाउन २.2.4 र 5.8. Gh घगाह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
प्रेत4उन्नत
El DJI प्रेत4उन्नत यो प्रो भन्दा अलि फरक छ। यसले प्रेत with सँग प्रायः सुविधाहरू साझा गर्दछ, स्पष्ट रूपमा, तर निम्न सुविधाहरूसँग जुन प्रोसँग फरक गर्दछः
अवरोध पत्ता लगाउने प्रणाली: यसले केवल अगाडि र तलबाट बाधा सेन्सर गर्दछ, तर पछाडि र साइडबाट बाँकी सेन्सरहरू हटाउँछ। तसर्थ, यदि तपाईं यसलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्नुहुन्न भने, यो पक्ष र पछाडि अवरोधहरूसँग टक्राउन सक्छ ... त्यो हो, यो प्रो लाई मा डरलाग्दो हीन छ।
वजन: २० ग्राम हल्का
तसर्थ, यो एक अर्को विकल्प हो उन्मुख सबै भन्दा विशेषज्ञहरु लाई र ती कलाकृतिहरूको पाइल्टि master राम्रोसँग मास्टर गर्छन्। यसको सट्टामा, मूल्य बेस प्रेत4र प्रो बीच छ, त्यो हो, प्रो वा प्रो प्लस जस्तै महँगो छैन.
प्रेत4उन्नत +
यदि हामी अग्रिमलाई सन्दर्भको रूपमा लिन्छौं भने DJI प्रेत4उन्नत प्लस छ केवल लगभग € १०० को उच्च मूल्य। सुविधाहरू लगभग उस्तै छन्। एक मात्र चीज भिन्न छ:
रिमोट कन्ट्रोल: .5.5..XNUMX ″ स्क्रीन समावेश सहित
प्रो को तुलनामा प्रो को साथ।
DJI प्रेत3​​मा सुधारहरू
यदि तपाइँ आश्चर्य गर्नुहुन्छ भने कसरी DJI प्रेत4बनाम प्रेत 3, यो वर्णन गर्न एकदम सरल छ। यदि हामी प्रेत Standard मानकलाई प्रेत base आधारसँग तुलना गर्छौं भने हामीसँग निम्न छ:
दायरा: १०००m vs 1000m
स्वायत्तता: २ min मिनेट बनाम २ min मिनेट
वजन: 768g बनाम 1380g
क्यामेरा सेन्सर: १२ MP पूर्ण HDD सीएमओएस बनाम १२ एमपी 12 के सीएमओएस
कनेक्टिविटी: वाइफाइ बनाम वर्धित लाइटब्रिज (x4 गति बनाम वाईफाई भन्दा बढी)
जियोलोकेशन: जीपीएस बनाम जीपीएस + ग्लोनास
मूल्य: लगभग € 728२1100 लगभग बनाम। XNUMX ११००
अवश्य पनि टेक्नोलोजीहरू र ड्राइभि mod मोड सुधार भएको छ। छोटकरीमा, यो हासिल भएको छ एक उच्च गुणवत्ता ड्रोन र फाइदाहरू, यद्यपि यसको पनि एक धेरै उच्च वजन छ। वास्तवमा, त्यहाँ प्र्याम of को केहि संस्करणहरू छन्, जस्तै प्रो र अग्रिम। यदि हामी प्रेत Pro प्रो का सुविधाहरू तुलना गर्छौं भने तिनीहरू थोरै समान छन् जहाँ फेन्टम starts सुरु हुन्छ, त्यो हो, that००० मिटरको दूरी र away के क्षमताको साथ १२ एमपी क्यामेरा।
त्यस कारणका लागि, यदि तपाइँ बेस प्रेत4जत्तिकै मोडेल खोज्दै हुनुहुन्छ, तर सस्तो मूल्यमा, तपाईं सक्नुहुन्छ प्रेत3​​किन्नुहोस् जसको कम मूल्य छ यो पुरानो हो। केवल एउटा चीज मात्र पर्याप्त त कम छ ड्रोन र कन्ट्रोलर बीचको कनेक्टिविटी, जुन greatly मा धेरै सुधार गरिएको छ।
भविष्य DJI प्रेत 5
हामी के बाट आशा गर्न सक्छौं भविष्य DJI प्रेत। A. माथिको सुधारका साथ यो एक ड्रोन हो। यद्यपि प्रेत4ले अब डीजेआई दायराको शीर्ष प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसले आउँदो पुस्तालाई आउन लामो समय लिन सक्दैन। यदि हामी to का सम्बन्धमा of का सुधार विश्लेषण गर्दछौं भने हामी ड्रोनलाई धेरै बिन्दुमा सुधारको आशा गर्न सक्दछौं।
स्वायत्तता- DJI प्रेत54 भन्दा बढी शक्तिशाली हुन सक्छ, तर यसको दायरा पनि राम्रो हुन सक्छ। हुनसक्छ केही मिनेटमा यो हालको आधा घण्टा भन्दा बढि हुन्छ जुन तिनीहरू प्रायः पछिल्लो हुन्छ।
कनेक्टिविटी: लाइटब्रिज टेक्नोलोजीमा सुधार हुन सक्दछ, किनकि यदि भिजुअल सेक्शन सुधार गरिएको छ भने ढिलाइबाट बच्नको लागि राम्रो लि link्क चाहिन्छ र ब्यान्डविथ उच्च छ।
पुग्नुहोस्: हुनसक्छ नयाँ प्रेत5ले 7000००० मीटर अवरोध पार गर्‍यो।
क्यामेरा- क्यामेरा चीज मध्ये एक हो कि सब भन्दा बदल्न को लागी, शायद एक उच्च FPS दर को साथ 4K को लागी र 8K क्याप्चर गर्न को क्षमता को साथ।
म आशा गर्छु कि म तिमीसंग छु ड्रोन छनौट गर्न मद्दत गर्‍यो र आफ्नो श doubts्का हटाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » ड्रोन » DJI प्रेत 4: प्राविधिक र तुलनात्मक विशेषताहरू
RJ45: सबै नेटवर्क कनेक्टरको बारेमा